Miinada Mudaysan W/Q Mohamed Aden Hassan.
Sunday 15th November 2020 10:13:54 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Ethiopia dal dhaca bariga Africa gaar ahaan geeska Africa dal ay dalkeena Somaliland jaar yihiin.
Dalka ugu dadka badan bariga Africa dalka labaad e ugu dadka badan qaarada Africa.
Dhaqalaha koraya e qaarada iyo dunida o dhan dalka leh diyaarada ugu wanaagsan e qaarada uguna diyaaradaha badan qaarada Africa diyarado gaadhaya 111 diyaaradod.
Dalka 60aad e kaalinta military ga e dunida, dal ay ku noolyihin qomiyado aad u badan isla markana leh hal dawlad o dhaxe o dalka o dhan masuul ka ah bal halka yar is dul tag o aad u fakar.
Kaso gudub xogtaas aqoonaysan sida aynu lawada socono dalka Ethiopia waxa u jihastay dagaal sakooye o aad u qadhaadh o ka dhaxeya dawlada dhaxe e federalka ah e u hogaamiyo RW Abiy ahmed iyo ismaamulka tigrayga waxa ayna wada galeen dagaal dhulka iyo cirka ah o aad u qadhaadh o dad badani ku dhinteen.
Tigraygu Ethiopia waxay ka yihiin 6% tiro ahaan waa dad gaadhaya 4.96million waa tirakoobki la sameyay sanadkii (2014) waa dad aad udag o qab leh waa wada meles zenawi waxa ayna ku noolyihin dhinaca waqooyi e dalka Ethiopia kala badh ayay yihiin ciidama millatry ga e Ethiopia waxayna ku qalabaysanyihin saanad millatry o dhulka iyo cirka ah.
Xagee ka bilaabmatay xiisadani?
Abiy marki u yimi xafiska 2018 ka waxa u si fudud ugu warejiyay Eritrea gobihi laysku haystay waxa una saxib dhaw ka dhigtay Eritrea iyo madaxwayne asis afwerki xaladas muumulka tigrayga waxa u arkayay dulan qaawan o aan maro lagu dadin.
Waxa kale o abiy kala diray xisbigi 30 ka sano Ethiopia so xukamayay waxa una ku badalay mid cusub xisbiga barwaqada taas o cadho baahsan dhalisay maadama xataa shaqala hoosadka dawladda iyo shacabka guud ahaan ay xisbigaas tagaro u ahayen meesha waxaba ka baxday is aminaadi.
Waxa u beegsaday sarakishi tigrayga e wax la xidho iyo wax la eryado o la baacsado ayay noqdeen.
Waxa kale o jirta in muddo xileedka RW abiy dhamaday bishi hore e October 2020 taas o lo sameyay muddo kor dhis sanad ah o keentay khal khal iyo xasilooni darro hor leh.
Xiisadan sameen inte leeg ayay yeelanaysa?
Maadama Ethiopia tahay dal muhiim u ah geeska Africa iyo guud ahaan qaarada Africa hadii dagaalku sidaas ka sii qadhaadhado waa in aynu u diyaar garawnaa mawjado fatahaado ah o dad badan ah o dalkeena Somaliland yimaada kuwaas o colaada kaso barakaca.
Waxa gabi ahaanba istaagi doona ganacsigi Ethiopia inaga dhaxeyay waxa mesha ka bixi doona isticmaalka dakada berbera maadama dagaalku aad u waynaday dawladanu anay waxba kala xakamayn kari waydo waxa istaagi doona dulimaadka diyaarada Ethiopian airline o dalkeena maalinki labo jeer timaada waxa go,I doona u safrida dadkeena e dhinaca dabada maadama dalka dhan hal diyaarad timaado.
Waxa istaagi doona ganacsiga Ethiopia kala dhaxeya qaarada iyo dunida inta kale.
Caasimada addis ababa maadama ay tahay xurunta midawga Africa o gurina uga dhisanyahay midawga Africa u dalka china maal galiyay waxa hakad gali doona hawlo maalmedki midawga Africa.
Samaynu intaas way kasi badan toona intaas waa sadaal haddi xaalku kasii daro.
Waa Adke W/Q Mohamed Aden Hassan.
Dagaalka Ethiopia W/Q Mohamed Aden Hassan.
13KA Qodob ee lagu qiimeyo dib u doorashada madaxwayne mareykan W/Q Mohamed Aden Hassan.